Coventry University - Kudzidza in United Kingdom. Education kunze Kwenyika
nyika : nyika dzakabatana
guta : Coventry
Acronym : GAC
Musakanganwa kuti kurukura Coventry University
Kunyoresa pana Coventry University
Tiri ramangwana, yunivhesiti ano ane vanodada tsika somunhu Akatipa dzidzo yepamusoro uye anonyanya Zvakarurama tsvakurudzo.
Vatinodzidza kubatsirwa ehurumende-of-the-nounyanzvi midziyo uye zvivako zvose kwomudzidzi nokuranga kusanganisira utano, magadzirirwo ouinjiniya mumarabhoritari, kuita unyanzvi Studios uye kadambari nzvimbo. Takapiwa vakasarudza naHama matatu omunyika Centres Zvakaisvonaka Pakudzidzisa uye Learning izvo tigone kushandisa nouchapupu mazakwatira emari muhutano, magadzirirwo masvomhu.
guta-centre redu kembasi iri nguva kukura uye Virtual, uye tine urongwa mamwe mubhizimisi mairi pamusoro mashomanana akatevera. Tiri pamberi guru Coventry, izvo chinowedzera guta yakapoteredza noushamwari uye vakagwinya uye tikwanise pave inobudirira mabhizimisi kudyidzana.
Kuburikidza rinobatanidza hwedu achitungamirira unopinza mabhizimisi uye masangano kuruzhinji uye yokuzvidira sectors, vatinodzidza navo vanokwanisa kuwana chirongwa uye kupinda muzvikoro mikana hunowedzera employability ravo chikoro.
The Sunday Times tafura yunivhesiti League akaita yandaipuwa Coventry University Modern University of Year. Muperekedzi pamisara zvikoro vachishandisa zvinotevera zvinodiwa sere: chiero nhamba kunoratidzwa mumabhuraketi.
kugutsikana Student (+50 kuti -55 pfungwa) – zvaunowana National mudzidzi kuongorora zviri scored kutora yokungotaura zvishoma uye kunonyanyisa zvibozwa zviri 50% uye 90% zvichienderana zvakadaro (date mabviro: reNational Student Survey);
Teaching umbirimi (250) – se vanotongwa scoring kanenge 22/24 pfungwa, avo yandaipuwa chakanakisisa, kana avo kuti ashandiswe zvikuru ichangopfuura umo mune chivimbo kwomudzidzi mitemo uye umo pakudzidzisa uye kudzidza, mudzidzi kunoita uye kudzidza zvinhu zvose zvaiswa yandaipuwa kunorumbidzwa (date mabviro: Quality Panga Agency; Scottish Yepamusoro Education mari Council; Yepamusoro Dzidzo mari Council for Wales);
Misoro '/ kufurirwa mazano (100) – misoro chikoro ukakumbirwa kuziva chemhando yepamusoro Rokutenderwa urongwa (date mabviro: The Sunday Times misoro 'kuongorora uye vezera kupima);
Research unhu (200) – inobva pamusoro zvikuru ichangopfuura Research Assessment Shandisai (date mabviro: Yepamusoro Dzidzo mari Council kuEngland (HEFCE));
A-pamwero / Higher pfungwa (250) – munyika audited mashoko nokuda haizopereri zvedzidzo gore inoshandiswa League tafura Masvomhu (date mabviro: hesam);
urovha (100) – nhamba vadzidzi vanofungidzira kuti vasingashandi mwedzi mitanhatu pashure chikoro rinowanikwa somunhu chikamu uwandu anozivikanwa dzokugara (date mabviro: hesam, Destinations pamusoro Leavers kubva Dzidzo Yepamusoro);
Firsts / 2:1S paakavapa (100) – ari chikamu vadzidzi kudzidza pamwe firsts kana 2:1 madhigirii; Unclassified madhigirii havachafaniri (date mabviro: hesam); uye
Dropout zvazvingava (+57 kuti -74 pfungwa) – nhamba vadzidzi vabude vasati kupedza kosi yavo rinofananidzwa ne nhamba kutarisirwa kuita kudaro (chiero nhamba unoratidzwa mumabhuraketi) (date mabviro: HEFCE, Performance zviratidzi muna Yepamusoro Education).
Verenga pamusoro pamapoka vedu Art, patani, Chirungu, Media, Kuita Arts uye Humanities.
Engineering, ENVIRONMENT AND kadambari
Information pamusoro Mathematics yedu, Engineering, jogirafi, Computing uye Automotive makosi.
UTANO UPENYU sayenzi
Courses kusanganisira Health Studies, BioMolecular uye Sport Science, Psychology uye Social Care.
Coventry DZEBHIZIMISI CHIKORO
Dzidza pamusoro pamapoka vedu Business, Economics, mari, Accounting, Marketing uye Management.
Coventry MUTEMO CHIKORO
Uzive zvakawanda pamusoro kudzidza kwedu nyanzvi mutemo makosi.
Kwakatangira Coventry University dzinogona kurondwa kudzokera remakore rechi19 chete kuvambwa Coventry College Design muna 1843. Gare gare Yakazopiwa zita rokuti Coventry School of Art, zvakanzi zvakare zita mukuvamba kwezana remakore rechi20 kusvikira Municipal Art School sechikamu theEducation Act 1902. Mumwe kwokupedzisira zita nokuchinja kwakaitika 1950s, kana zvikazikamwa sezvo College of Art.
Mukupera 1950s, kugadzirisa kudiwa mukuru pamwero unyanzvi kudzidzisa Coventry iyo aivapo Coventry Technical College (zvino City College Coventry) kugona kusangana, kweDzimba chevanorwara idzva rakatanga. wakazaruka 1961, rainzi Lanchester College of Technology, zita pashure Frederick Lanchester.
mu 1970, uye Lanchester College of Technology uye College of Art, pamwe Rugby College Engineering Technology iri pedyo netaundi Rugby, akabatana kuumba Lanchester Polytechnic. Tsika yacho akasarudzwa sezvo zvakadaro February 1971 panguva iyoyo Education Secretary Margaret Thatcher. Zita Lanchester akapa sangano imwe dhigirii pamusingaonekwe (akanga kazhinji kuvhiringidzwa vose Lancaster uye Manchester), ruripo apo hapana vakwikwidzi pamusoro BBC Radio 4 mukuru ruzivo ratidza Brain Britain aigona kupa yakarurama nzvimbo yayo. The Polytechnic chikwereti chacho kudzidza mumhemberero 1974 kutevera Birmingham the pub kubhombiwa nokutya kuti kuungana pachena zvinogona kuitirwa; muchato yakazopedzisira rakaitirwa 2009, 35 Papera makore. Lanchester Polytechnic akazoonana Yakazopiwa zita rokuti “Coventry Polytechnic” mu 1987, uye apo theFurther uye Higher Education Act 1992 yaiita Coventry Polytechnic payunivhesiti munzanga gore, zita akazonzi Coventry University.
mu 2010, mumwe kembasi muLondon yakatangwa mamwe kukwezva vadzidzi dzakawanda kuti yunivhesiti. mu 2012 “Coventry University College” rakanga ramiswa mukati huru payunivhesiti ritenderane, kupa zvinodiwa kusvikira pamwero-pamwero panguva yakaderera mutengo zvichienzaniswa nezvaiitwa kuyunivhesiti mari yechikoro.
Unoda kurukura Coventry University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Coventry University musi Map
Photos: Coventry University pamutemo Facebook
Coventry University wongororo
Join kukurukura pamusoro Coventry University.
London Chikoro Economics London